सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजाने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । देशभर ३५ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारी पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित छन् । सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार बढ्दै गएपछि सोही अनुसार सुशासन र अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीको कारोबारमा जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । यसैगरी सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी भाग्ने जस्ता ठगी पनि हुने गरेको छ । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले संस्थाको संख्या घटाउन मर्जरको कार्यक्रमलाई अघि सारेको हो ।
यसअघि संघीय सहकारी विभागले सहकारीको मर्जरका लागि मर्जर निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले मर्जरमा जान अटेर गर्दै आएका छन् । सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले भने सहकारी क्षेत्रमा पनि फोर्स मर्जरको कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउँदै आएका बेला बजेटमा आएको मर्जर कार्यक्रमलाई कसरी बनाउने र बजेटमार्फत सहकारीका कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग गरिएको कुराकानी :
मर्जर प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्छ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको विषय ओझेलमा परेकाले बजेटमा पनि सम्बोधन नहुने हो कि भन्ने डर लागेको थियो । तर, बजेटमा हामीले उठाएका धेरै विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले हामीले उठाउँदै आएको करको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । सहकारी ऐनअनुसार नै करको दर समायोजन भएको छ ।
केन्द्रीय संघहरूलाई टीडीएस छुट गर्ने कुरा आएको छैन, रातो किताब हेरेपछि थाहा हुनेछ । सहकारी ऐनमा करको विषयमा गरिएको व्यवस्थाअनुुसार करको दर हेरफेर भएको छ । लकडाउनपछि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई तरलताको समस्या हुन्छ, त्यसका लागि फन्डको माग गरेका थियौं । तर, त्यो आउन सकेन । सहकारी बैंकमार्फत सफ्टलोनको माग राखेका थियौं । साना किसान बैंकमार्फत १ हजार सहकारीमा परिचालन गर्ने विषय पनि आएको छ । उपभोक्ता पसलका कुरा पनि आएका छन् । पहिलो स्वास्थ्य र कृषिसँग जोडिएर बजेट आएको छ । वित्तीय सहकारीको हकमा मर्जर, सूचना केन्द्रका कुरा, प्रविधिका कुरा, स्वनियमनका कुरा आएको राम्रो छ, यसलाई कार्यविधिले प्रस्ट पार्ला । अरू समग्रमा धेरै आएका छन्, जुन कृषि तथा अन्य क्षेत्रसँग सहकारीलाई सहकार्य गरेर जान सकिन्छ ।
गरिबी निवारण कोषका ३२ हजार सामाजिक संस्था १९ अर्ब पुँजी सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने भनेको छ । अब नयाँ संस्थाभन्दा भएका संस्थासँग मर्जर गर्नुपर्छ । सहकारीको सिद्धान्त मूल्य–मान्यताअनुसार स्वअनुगमनलाई अघि बढाउने कुरा पनि आएको छ ।
यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरू मर्जरको कुरा पनि आएको छ । अब सहकारी अभियानलाई उत्प्रेरित गर्दै मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउनका लागि सरकार र सहकारी अभियानको सहकार्य पनि आवश्यक छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्रविधिमा प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था पनि आएको छ । सहकारीको कारोबार डिजिटलाइज्ड नहुँदाको समस्या हामीले लकडाउनको अवधिमा पनि भोगेका छौं । त्यसैले सहकारीको सेवालाई डिजिटलाइज्ड बनाउँदै जानुपर्छ । यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषका व्यवस्था पनि बजेटमा आएको छ । अब यी विषयहरूलाई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, नीतिहरू कसरी बन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मर्जरसम्बन्धी सेवा प्रभावकारी बनाउँछौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । सहकारी क्षेत्रमा यसको आवश्यकता पनि थियो । अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संख्या धेरै छ, जसका कारण सहकारीको सञ्चालन लागतसँगै कस्ट अफ फन्ड पनि उच्च छ, जसका कारण सहकारीको ब्याजदर महँगो हुने गरेको छ । सहकारीको ऋणको ब्याजदर घटाउनका लागि पनि संस्थाको कस्ट अफ फन्ड कम गर्नका लागि पनि मर्जर आवश्यक छ । अर्कातर्फ सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि संस्थाहरूको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि मर्जर एकदमै राम्रो विकल्प हो । हामीले सहकारीलाई एउटा सिस्टममा चलाउन भनेका छौं । अब सहकारी विभागले तोकेको स्ट्यान्डर्डभन्दा कमका सफ्टवेयर संस्थाहरूले चलाउन पाइँदैन । हामी त्यसको तयारी छौं । संस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न लागत उच्च हुन्छ । त्यसका लागि पनि संस्थाहरू मर्ज गर्नु आवश्यक छ । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि सहकारीको सेवा पनि डिजिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढ्यो । डिजिटल कारोबार गर्नका लागि संस्थाहरूको लागत धेरै हुने भएकाले संस्थामा सिस्टम लागू गर्नका लागि संस्थाको क्षमता बलियो बनाउन पनि सहकारीमा मर्जर आवश्यक छ ।
अहिले पनि सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको मर्जरलाई सहजीकरण गर्न आइरहेको छ । हामीसँग विद्यमान एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार संस्थाहरूको मर्जरलाई स्वीकृति दिएका छौं । तत्कालका लागि सहकारी विभागले गर्ने भनेको मर्जरका लागि प्रशासनिक सरलता नै हो । मर्जरका लागि संस्थाहरू आए भने छिट्टै निर्णय गर्ने विगतदेखिको अभ्यास छ, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँछौं ।
सहकारी संस्थाहरू एक–आपसमा मर्जरमा जाँदा के–कस्ता छुट दिने भन्ने विषय भोलि कार्यविधि बनाएर परिभाषित गर्ने विषय हुन् । अर्को विषय भनेको मर्जरका लागि कतिपय संस्थाहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो परेमा सहजीकरण पनि गर्न सक्छौं ।
अहिले विभागले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र पुनर्निर्धारण तथा एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेको छ । यो कार्यविधिले पनि मर्जरका विषयलाई थप स्पष्ट पार्छ ।
सहकारीमा पनि बैंक वित्तीय संस्थामा जस्तै फोर्स मर्जर गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका लागि हामीलाई त्यससम्बन्धी कानुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर के गर्दा मर्जर प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्दै आगामी नीति बनाउनुपर्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको मर्जर सहकारी विभागको भन्दा पनि सम्बन्धित संस्थाको कार्यक्रम हो । सम्बन्धित संस्थाहरूलाई नै मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ
मर्जरको आ–आफ्नै अभ्यास छ । जर्मनीमा २६ हजार बचत तथा ऋण ९ सय १३ वटा सहकारीमा झरेको छ । जहाँ पनि बचत तथा ऋणका साथै अन्य सहकारीहरूलाई पनि मर्जर गरेपछि प्रभावकारी बनाउने नै उद्देश्य हुन्छ । संस्था सानो हुँदैमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन ।
होइन, ‘इस्मल इज ब्युटिफुल’ पनि भन्छन्, तर कस्ट इफेक्टिभ भएन, नियमन गर्न सकिएन, सञ्चालन लागत उच्च भयो, सदस्यको आवश्यकता पूरा गर्न सकिएन भनेर मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो । अनुगमन गर्नका लागि मात्र संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर गर्ने होइन, सहकारी संस्थालाई बलियो र दिगो बनाउनका लागि पनि मर्जर आवश्यक छ ।
मर्जरलाई फोर्सफुल्ली लैजान मिल्दैन । रोगी संस्थालाई निरोगी संस्थामा मिलाएर दुवैलाई रोगी बनाउनु हुँदैन । त्यसैले मर्जरभन्दा अघि अनुगमनलाई एकमदमै स्ट्रोङ बनाउन आवश्यक छ । यस पटकको बजेटमा पहिलो पटक सहकारीको सिद्धान्तअनुसार स्वनियनमनको विषय सम्बोधन पनि भएको छ । त्यसैले अब सहकारीका केन्द्रीय संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको तुरुन्तै अनुगमन सुरु गर्नुपर्छ । संघहरूले सदस्य संस्थाहरूबाट पुँजी वा कारोबारका आधारमा शुल्क लिएर अनुगमन गर्न सक्छन् । संस्थाबाट अनुगमन शुल्क लिएपछि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अनुगमन गरेपछि संस्थाको अवस्था कस्तो छ ? संस्थालाई मर्जर गर्न उपयुक्त छ या छैन भन्ने जानकारी हुन्छ । संस्था स्वस्थ्य भएपछि फोर्सफुल्ली मर्जरमा लैजान सकिन्छ ।
पुँजी वृद्धि, कारोबार वृद्धि तथा दोहोरो सदस्यताका आधारमा संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ । संस्थाहरूलाई एक–दुई वर्षको समय दिएर कि मर्जरमा जानुहोस् वा संस्था खारेज हुन्छ भनेर बाध्यकारी मर्जरका लागि पोलिसी ल्याउन पनि सकिन्छ ।
सहुलियत दिएर मात्र मर्जर प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्दैन । काभ्रेको सहकारी र धादिङको सहकारीको मर्जर गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि मात्र मर्जर गर्दा त्यसले अर्को विकृति ल्याउन सक्छ । बरु मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउन प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा कतिवटा संस्था बनाउने भनेर संख्या निर्धारण गर्ने र त्यसपछि संस्थालाई मर्जरका लागि बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ।
मर्जरका लागि सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । संस्थागत सुशासन कमजोर भएका, सञ्चालकले अपचलन गरेका सहकारी संस्थालाई मर्जर गर्ने होइन त्यस्ता संस्थाहरूलाई त कारबाही गर्ने हो ।
अहिले सहकारीको विकासका लागि सहकारी ऐन नै बाधक छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यो संशोधन हुनुपर्छ । सहकारी जुन विषयका लागि दर्ता भएको हो त्यही काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिकै १४ हजार संस्था छन्, त्यसमध्ये १० हजार संस्था २५ जना सदस्य लिएर बसेका छन् । यी संस्था कालोबजारीका लागि खोलिएका हुन् कि ? अनुगमन नगरी यथार्थता थाहा हँुदैन । त्यसैले सहकारीको मर्जर प्रभावकारी नबनाई सुख्खै छैन । १० अर्बको कारोबार हुने सहकारी क्षेत्रलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले किन बेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने विषय रहस्यमय छ ।
नेपालमा ५ सय वित्तीय सहकारी भए पुग्छ
अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका धेरै ठाउँमा सहकारीका विषयहरू भावनात्मक रूपमा जोडिएका छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना र बजेट भने देखिँदैन । बजेटले पहिलो पटक सहकारीलाई स्वनियमन र सुशासन कायम गर्ने कुरा सम्बोधन गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको पाइँदैन । स्वनियनको चुनौती भनेको अनुगमन पनि हो । अहिले राज्यले सहकारीको अनुगमन गर्ने सामथ्र्य राख्दैन, यो कामका लागि अभियानप्रति विश्वास गर्दैन ।
यसैगरी सहकारीले डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै अघिबाट उठ्दै आएको विषय हो । यसका लागि केही सहकारी संस्थाहरू अघि पनि बढिसकेका छन् । यो विषय बजेटमा सम्बोधन भए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना पनि देखिँदैन । अर्को पक्ष भनेको हामीले सहकारीमार्फत पनि सहुलियत ब्याजदरको कर्जा परिचालन हुनुपर्छ भनेर उठाउँदै आएका थियौं । यो विषय बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । कर तिरेअनुसार राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई ठोस रूपमा सम्बोधन नगरेको हामीले महसुस गरेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षमा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय वित्तीय सहकारीहरू मर्जरको हो । धेरै अघिदेखि यो विषय उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रै कार्यक्रममा आएर सम्बोधन गरेको विषय पनि हो । मर्जरका लागि हामीले पनि पहल गर्दै आएका छौं । तर यो विषयमा हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । मर्जरलाई प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण बनाउन यसको टार्गेट क्लियर हुनुपर्छ । जापान र क्यानडाले रणनीति नै बनाएर एउटा निश्चित समयभित्र संस्थाहरूको संख्या घटाएका थिए ।
हामीसँग यो विषयमा कुनै रणनीतिक योजना छैन । एकातिर हामी मर्जरको कुरा गरिरहेका छौं, अर्कातर्फ जोडतोडका साथ संस्था दर्ता भइरहेको छ । अहिले हामीकहाँ तीन तहको कानुन प्रणाली छ । त्यो कानुनी प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न सकिएको छैन । अहिले पनि हामी मर्जर स्वस्फूर्त रूपमा गरिरहेका छौं । यसका लागि राज्यबाट सहजीकरण भन्दा पनि अनेक झन्झट र चुनौती भोगिरहेका छौं । त्यसैले मर्जरका लागि भावनात्मकभन्दा पनि ठोस कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो ।
वित्तीय पहुँच, अवसर र समावेशीकरणलाई विचार गर्दै मर्जरलाई अघि बढाउनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा जहाँ अहिले पनि वित्तीय पहुँच पुगेको छैन, ती ठाउँमा प्रश्रय र प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ भने सहरमा आवश्यक पर्दा फोर्स मर्जर पनि गर्नुपर्छ । विगतमा हामीले नेपालमा ५ सय हाराहारीमा बचत तथा ऋण सहकारी भए पुग्छ भनेको थियौं । अहिलेको अवस्थामा संख्या कति चाहिने हो, पुनः अनुसन्धान र विकासका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । रणनीतिक योजनासहित टार्गेट लिएर मर्जर योजना अघि बढाउनुपर्छ ।